Qubanaha » Doorashada Somaliland Maxay kaga duwantahay kuwii hore ee laga qabtay deegaanadeeda?
Doorashada Somaliland Maxay kaga duwantahay kuwii hore ee laga qabtay deegaanadeeda?
Qubanaha.net-Hargeysa-Doorashada Somaliland maanta ka bilaabantay ayaa wali waxaa ay dadku ku jiraan safafka dhaadheer ee ay ku dooranayaa madaxwaynaha hogaaminaya shanta sano ee soo socda.Doorashada waxaa sanadkani lagu galayaa qalab Electronic ah kaasi oo dadka lagu diwaangaliyay islamarkaana garan kara isha qofka bini’aadanka si markiiba loo garto in ay codeeyeen indhaha qofka Qofka ku Cel-celiyana loo ogaado, nidaamka doorashada lagu qabanayo ayaa ah midka ugu casrisan ee imika waddamada dimuqraadiga ah ku dhiibteen codka Hal qof iyo hal cod.
Dhamaan deegaanada ay doorashadu ka socota waxaa looga codeynayaa si nabad ah, waxaana dadka codeynaya ka qeyb ah dadka naafadaha ah ee laxaadkoodu kala dhimanyahay.
Doorashadan waxaa ku tartamaya saddex musharaxa kuwaasi oo laba ka mid ah ay noqonayso markii u horeysay ee ay kursiga madaxwaynenimo isku soo sharaxaan.
Xisbiga mucaaridka ee Waddani oo 2012 ka mid noqday xisbiyada siyaasada Somaliland ayaa isaguna ah ka ugu yar xaga da’da ee tartanka ku jira.
Madaxwaynaha Somaliland imika maamula Axmed Siilaanyo ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta isagoo aan kursigaasi u tartamayn wuxuu taageerayaa musharaxa xisbiga uu kasoo baxay ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi.
Musharaxiinta ayaa bulshada ugu baaqaya inay nabada ilaaliyaan oo ay doorashada ka weyntahay nabada Somaliland ka jirtay 25sano ee u dambeeyay.
Doorashada waxaa ku sugan oo ka qaybqaadanaya goobjoogayaal caalami ah kuwaasi oo ka kala yimid 27 dal oo adduunka ah.
Xubnaha komishanka doorashooyinka ee qabanaya doorashada waxaa ay ku cusubyihiin in doorashadan oo kale ay dalka ka qabtaan, waxaana ku jira wariyayaal idaacado caalami ah usoo shaqeeyay.
Warbaahinta caalamka ayaa si aad ah uga hadlaysa doorashada Somaliland ka socota kuwaasi oo ay magaalooyinka waaweyn ku suganyihiin wariyayaal caalami ah oo ka socda Tilifiishano, Idaacado iyo waliba mareegaha internetka.
Beesha caalamku waxaa ay doorashada ku tilmaantay guul weyn oo xaga dimuqraadiya ay u qaaday dalka aan adduunka aqoonsi buuxa ka helin.
Shacabka codeynaya iyo masuuliyiinta siyaasadu waxaa ay isku dhiiri galinayaan in si nabad ah loo codeeyo si bulshada caalamka loo tuso in dimuqraadiyad ay ka jirto deegaanada Somaliland.
Goboladda Sool, Sanaag, iyo Togdheer qaybo ka mid ah oo aan doorashooyinka laga qaban ayaa sanadkan ay doorashadu ka dhacday.
Musharaxiinta u tartamaya doorashadan ayaa markii u horeysay galay laba doodood oo ay kaga hadlayaan siyaasada musharax kastaa shacabka u wado.
Doorashadani waxay noqonaysaa tii saddexaad ee hal qof iyo hal cod ee ka dhacda deegaanada Somaliland sidoo kale waxay noqonaysaa doorashadii shanaad ee lagu doorto madaxwayne xukuma Somaliland.